क्लासिक मिनी इलेक्ट्रिक: "विंटेज" बाहिर र भित्री भित्र भविष्य ग्याजेट समाचार
आज घटनाले ढोका खोल्यो न्यू योर्क इंटरनेशनल ऑटो शो २०१ 2018। त्यहाँ, फर्महरूको एक समूह आउँदै गरेको महिनाहरूमा आफ्नो प्रगति देखाउन भेला भएका छन् र उनीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर जान्नको लागि। मिनी, बीएमडब्ल्यू समूह बाट, दर्शकहरु लाई चकित गरीएको छ क्लासिक मिनी इलेक्ट्रिक.
यस सवारी साधन, जुन तपाईले चित्रमा देख्न सक्नुहुनेछ कि हामी लेखमा संलग्न गर्छौं, जुन दशकौं पहिलेको क्लासिक मिनी हो, यसमा भविष्यको मेकानिकी छ। अर्को शब्दहरुमा, मिनी हुन चाहेको छ - फेरि - जर्मन समूह भित्रको ब्रान्ड, जसले निकट भविष्यमा अगाडि बढ्ने मार्ग चिन्ह लगाउँदछ। र यो कसरी हुन सक्दछ, भविष्य पूर्ण रूपमा बिजुली हो।
El क्लासिक मिनी इलेक्ट्रिक यो केवल एक अवधारणा हो कि, तपाईंले राम्रोसँग कल्पना गरेको पनि हुनसक्दछ, बिक्रीको लागि राखिनेछैन। जे होस्, यस प्रस्तुतीकरणले दर्शकलाई अवाक् छोडेको छ, उसले आफ्ना लामो समयका ग्राहकहरूलाई स्पष्ट सन्देश छोडिदिएको छ: मेकानिक्स फरक हुन सक्छ र तिनीहरूले समय अनुकूल गर्नै पर्छ, तर तिनीहरूको डिजाइन र व्यक्तित्वले यसलाई कहिल्यै हराउनेछैन।
मिनीले सबै इलेक्ट्रिक मोडलमा काम गरिरहेको कुरा पनि नयाँ छैन। अझ बढी, ब्राण्डले आफैंको प्रेस विज्ञप्तिमा यसलाई पुष्टि गर्दछ: यो गाडी तीन-ढोका मिनीमा आधारित छ। अरु के छ त, २०१ in मा प्रकाश हेर्नको लागि तालिकाबद्ध गरिएको छ, मात्र जब ic० औं वार्षिकोत्सव आइकनको मोडेलको पहिलो इकाईको सुरुवातको।
केही छविहरू केवल एक बर्ष पहिले हेरिएको थियो। र यो ज्ञात छ कि केही तत्वहरू यस इलेक्ट्रिक मिनीमा हराइरहेका छन् जस्तै एक्जोस्ट आउटलेटहरू वा एयर इनलेटहरू। साथै, प्रारम्भिक अफवाहहरूको अनुसार, BMW समूह कारको स्वायत्ततामा एक हुनु पर्छ लगभग 350 XNUMX० किलोमिटर स्वायत्तता एकल चार्जमा। थप रूपमा, मोटरको प्रतिक्रिया खराब हुँदैन: ० देखि १०० ले उनीहरूलाई seconds सेकेन्ड भन्दा कम गर्नेछ यसको अधिकतम गति १ 150०-१-160० किमी प्रति घण्टा भन्दा बढी हुँदैन.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » क्लासिक मिनी इलेक्ट्रिक: "पुरानो" बाहिरी र भित्ता भविष्यमा